DAAWO: Min Farmaajo, Rooble ilaa madaxda maamullada aamin maka yihiin MAS’UULIYADDA sawirradaa murugada leh ka ratibmaysa?!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Min Farmaajo, Rooble ilaa madaxda maamullada aamin maka yihiin MAS’UULIYADDA sawirradaa...
DAAWO: Min Farmaajo, Rooble ilaa madaxda maamullada aamin maka yihiin MAS’UULIYADDA sawirradaa murugada leh ka ratibmaysa?!!
(Hadalsame) 20 Nof 2021 – Waxaa Somalia ka soconaya laba waqcadood oo aan war isu haynin, balse ay runtii ahayd inay aad iskaga war qabaan.
Waa siyaasadda sii khiyaaliyoobaysa ee kharashka iyo laaluushka ku mira dhasha iyo ummadda dhibban ee khilaafyada dhiiglaha ah ee danaysiga ah ee ay ka siman yihiin wadaad iyo wabiin, ay misna sii daashanayaan abaaraha haatan rukunka noqday ee wax laga saarayo qorshe xumada siyaasadda lafteeda.
Haddii aan hal sadar ka qoro dhibka maanta Somalia ka haysta siyaasadda, waxaa hubaal ah in halkii Xildhibaan uu u baahan yahay lacag 2 ceel looga qodi karo meel Somalia ka tirsan, si loo badbaadiyo nolosha wiilkaa yar ee dhoobada leefaya.
Halkii xildhibaan waxaa laga doonayaa lacag lagu sheegay diiwaangelin oo ah halka uu musuquba ka bilowdo maadaama aysan lacagtaasi aadaynin khasnadda dadwaynaha, walow tan aadda lafteeda aan ummad wax loogu qaban. Waxaa dheer inay laaluush uga baahan yihiin 101 qof oo qaarkood aan xitaa wejiyadooda loo jeedin lab iyo dheddig, jinni iyo insi waxa ay yihiinna aan la garanayn.
Haddii haddaba uu dadkii sidan u silcayo siyaasaddiina ay iska noqotay mid ku barraahda balanbalka haysta isla dadkii ay badbaadin lahayd, mid kasta oo yimaada isagoo ku qaylinaya halkudhegyo aan raqbadda dhaafsiisnayn oo munaafaqnimo dugsanaysana uu kasii liidanayo kii isaga ka horreeyey, waxaa halis wayn ku jira aayaha dalka & dadka.
Marka aad weliba eegto inta dhib ee Somalia yaalla ee aad u bandhigto siyaasadda aanba u samaysnayn inay taa wax ka qabato oo ay haatan u malabsanayaan kuwii bulshada ugu liitey maqaam iyo micneba waxaad ogaanaysa in aan isle’egtaa fashilan lagu badbaadin karin dal fashilan.
These kids barely got out when they heard the sound of the truck, with each having their Jerrycans it clearly shows that the drought has impacted from the elderly to the children & affected all levels of the community. @alihwarsame @MoHADM_Somalia @HonAbdirahman15 @JustAwBulle pic.twitter.com/S8tvWj3bZc
— Gedo Drought Relief Committee (GDRC) (@GDRCommittee) November 19, 2021
Previous article”Ninka ”diley” wuxuu kasoo boodey dabaqa 8-aad!” – Gabar BBC u shaqaynaysey oo ”amaandarri” uga soo tagtay Addis Ababa oo Nairobi lagu diley!
Next articleDal Yurub ah oo qarka u saaran inuu kala daato (Gobol fallaago ah oo kasoo dhex baxay)